Fampitahana | Ampitahao ny tombony sy ny ratsy amin'ny mpitantana PMSes sy fantsona samihafa
Tompona hofan-trano fialan-tsasatra ve ianao na mpandraharaha mpikarakara serivisy voarohirohy amin'ny sehatry ny fitantanana fananana? Mety hitady fitaovana mety indrindra hanombohana ny orinasanao mandritra ny fotoana fohy ianao na ny vahaolana misy anao ankehitriny dia tsy fanaterana izay tena ilainao. Ny fandanjana ny tombo-tsoa rehetra sy ny lafy ratsy dia tsy maintsy atao mba tsy hanao fahadisoana mety lafo. Mila fanampiana? Mamaky foana na miresaka amin'ny mpikambana ao amin'ny ekipa manampy anay hanampy anao amin'ny fizotranao fanapahan-kevitra.
Na mpitantana hotely ianao, tompona trano fandraisam-bahiny, mpandraharaha trano misy serivisy, na orinasam-pitantanana trano fialan-tsasatra, dia tsy isalasalana fa teboka fanaintainana maro ezahanao vahana.
Eo am-pitadiavana vahaolana, ny demo dia toa tsara hanombohana azy. Fa raha vao misoratra anarana ianao dia mahatsapa faingana fa ny volamena rehetra dia tsy volamena! Mety ho sarotra ny manavaka ny fitaovana sy ny endri-javatra efa misy raha tsy nampitahanao ny PMS na ny mpitantana fantsona taloha.
Ao anatin'ny andiana lahatsoratra fohy, Zeevou dia hampitaha ireo fiasa sy fiasan'ny mpamatsy hafa vs azy manokana. Farany, anjaranao ny misafidy ny PMS sy / na ny mpitantana ny fantsona izay mifanaraka indrindra amin'ny zavatra takinao amin'ny maha-mpitantana fananana anao amin'ny karazany rehetra. Manantena izahay fa ireo lahatsoratra fampitahana ireo vokatra ireo dia hanome fandinihana antsipirihany-centric fanadihadiana ary hanampy anao hahatratra ny safidy tsara.
Andao ho hitantsika izay tadiavinao ...
Zeevou vs ny Porter App
Tsy ao anaty lisitra?
Mangataha fotsiny iray dia hikarakara ny ambiny izahay!
Ny fandaniana ora maro amin'ny demôna hanandramana hahitana ny tena teboka miraikitra amin'ireo mpamatsy isan-karazany dia asa sarotra sy mandany fotoana. Ao amin'ny Zeevou, izahay dia manolo-tena hanampy ireo mpampiantrano mpiara-miasa amintsika hamonjy fotoana betsaka araka izay azo atao. Noho izany, hampihenana ny ezaka ataonao amin'ny fitadiavana vahaolana tonga lafatra ho anao, atolotray ny 1: 1 ao amin'ny Zeevou Demo maimaim-poana miaraka amin'ny fotoana fitarihana fohy dia fohy hatramin'ny famandrihana. Ankoatr'izay, ny Ekipanay dia nanokana fotoana hijerena ireo mpitantana fantsona hafa, ny Management Management Systems (PMS) ary ny famandrihana ireo mpanome motera eny an-tsena.
Raha niresaka tamin'ny mpampiantrano mpiara-miasa mety amin'ny demos izahay ary nanao ny fikarohana fanampiny, dia nanandrana nanaparitaka ity fampahalalana ity ho fampitahana mahasoa izahay eo amin'ny endrik'i Zeevou sy ireo an'ny mpamatsy hafa, mba hanehoana ny fomba hamahanay hevitra sasany. Mazava ho azy, ny sasany amin'ireo mpifaninana aminay dia hanolotra endri-javatra sasantsasany izay mety mbola tsy ananantsika, noho izany dia nanandrana nanao mangarahara sy tsy miangatra araka izay azo atao izahay amin'ny famakafakana. Ao amin'ny Zeevou, manandrana manasongadina sy manome fotoana betsaka izahay.
Manantena izahay fa hitanao fa mahasoa ireo fampitahana ireo rehefa manandrana misafidy ny mpitantana fantsona tsara indrindra na PMS amin'ny filanao amin'ny 2021.